Miino kii aasayay kula qaraxday Isgoyska Black Sea ee Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Miino kii aasayay kula qaraxday Isgoyska Black Sea ee Muqdisho
Muqdishu (Keydmedia) - Qaar ka tirsan Dadka ku nool Xaafadda Black sea ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sheegeen in Miino ay halkaasi kula qaraxday Nin doonayay inuu ku aaso Isgoyska Black sea.
Saakay ayaa mar qura Nawaaxiga Isgoyska Black Sea waxa laga maqlay Qarax xooggan oo la sheegay in uu ahaa Miinada nuuca dhulka lagu aaso taasi oo uu ku geeriyooday kii aasayay.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay Keydmedia in Ninkii Qaraxa aasayay uu ka tirsanaa Kooxda Al Shabaab-Qaacidda oo looga bartay inay Waddooyinka Muqdisho ku aasaan Miinooyin mararka qaar la qaraxday Gawaaridda ay saaranyihiin dadka rayidka ah.
Qaraxa kadib ayaa waxaa Goobta gaaray Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda KMG,kuwaasi oo Rasaas ku furay dad ku sugnaa meel aan sidaasi ugu fogeyn goobta ay Miinada ka qarxday, waxaana halkaasi lagu arkay meydka Ninkii aasayay Miinada oo cad cad u kala go’ay.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Al Shabaab ay Muqdisho kula qarxdo Miino ay ku aasayaan Waddooyinka ku yaalla magaalada tan iyo markii Ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISIOM ay Al shabab kala wareegeen muqdisho sanadkii tagay.